Siyakwamukela ukubhala umuphi umugqa bese ushiye uphawu lwakho ngezansi Guestbook.
Guestbook ingaphansi izibalo isivakashi yamakhasi Holm wesifunda avakashelwa-. Nokho, ngokuvamile kuba kakhulu umuntu ubhala okuthile. Phakamisa izwi lakho!
Shiya ukubingelela noma ukusho ukuthi ucabanga mayelana nento ethile onayo engqondweni!
0 imicabango ku "Guestbook”
Gun Lundgren ku 12 Juni, 2016 ngesikhathi 13:51 wathi:
Njengoba ozalwa Holmbo yokuhlala Östbyn kuze waqala esikoleni, Ngizizwa ashisayo Holm. Usese nabangane nabantu obajwayele endaweni kunjani ekhaya uma ngifika lapho. Imikhonzo Gun.
Rockabilly Ezihlubukini Sundsvall ku 30 May, 2015 ngesikhathi 19:26 wathi:
Sawubona. Holmbygden. Vele ufuna ukugcizelela ukuthi Midsummer Hlangana ngeke kwenzeke kulo nyaka. Ngokudabukisayo kungase kubonakale yebo. Kodwa lapho labo kumele ukushayela ngokuthile smear, Futhi ngisho nokulala ngenxa yobuncane ngezinto, Ord.vakter Bet, izimo, njll. Khona-ke masibuze kunalokho Midsummer Hlangana khona Graven..Rockabilly Ezihlubukini .
Ingabe wayengahlosile ukuba ukuphamba / nishaye iyiphi .Därmed siyakubonga kithi futhi sethemba ungathola okunye kule wesifunda engase isebenze kangcono kunalokho sasizama
Uhlobo o Sanibonani Thembeka
Rockabilly zihlubuki Sundsvall
Siphinde ukubabonga ngokubamba 2 Izinkathi zonyaka ezazingaphansi .
Holmbygden.se ku 2 Juni, 2015 ngesikhathi 23:22 wathi:
Hej alla Rockabilly Ezihlubukini,
Kungaleso ubudlelwane bethu isidina kakhulu (!) ukuzwa ngalo Kuthi Midsummer Ukuhlangabezana Holm. Kuyadabukisa ukuzwa indaba yakho. Uma kungenjalo, u kakhulu baziswa iniative nelungiselelo futhi Zithokozise zonke izivakashi.
Siyabonga wonke umsebenzi owufaka phansi!
Ukuthuthukiswa Holm wesifunda
uLina Näslund ku 15 April, 2015 ngesikhathi 18:14 wathi:
Sawubona! Ngihlala lapha kuleli dolobhana okwesikhashana futhi silwenza ubucwebe
Futhi kancane okunye umuntu huh nentshisekelo uhambo? Noma ubani uyazi
Ngamunye esenzakalweni esisodwa lalingaba ubusuku? Abazithobayo uLina superlina84@hotmail.com
Soren Olofsson ku 14 Disemba, 2013 ngesikhathi 12:36 wathi:
Siyabonga ngalo lonke ulwazi kusuka Holm!
Holmbygden.se ku 16 Disemba, 2013 ngesikhathi 10:01 wathi:
very funny ukuzwa ukuthi elide izivakashi baqonde futhi uvakashele indawo yethu!
Karl Blomberg ku 26 April, 2012 ngesikhathi 08:30 wathi:
Siyakuhalalisela kwiwebhusayithi enkulu!
Manje kumelwe futhi ukhangise URL, isibonelo, ngezibonakaliso nhlobo amaphuzu ukungena Holm wesifunda.
Holmbygden.se ku 26 April, 2012 ngesikhathi 14:35 wathi:
Yebo, umbono uye usishayile nge. Nokho, Kuze kube manje, noma yiluphi uhlobo lwento ezenziwe – umsebenzi futhi kwenziwe umuntu… Siyajabula kuze zonke esisiza ukumaketha thina, ngoba kuze kube manje ukuthi ukusakaza kuphela ngokusebenzisa ulimi lwabantu futhi internet ngokuvamile.
/Niklas Wikholm, -Webmaster
Peter Lindeberg e Skåne ku 6 Februwari, 2012 ngesikhathi 11:45 wathi:
Kwakuwusuku enkulu ukuze uthole i-imeyili ku-Ula Lindenberg kusayithi omusha we-intanethi kusukela Holm wesifunda. izindaba zakamuva lokubhala sifanamsindvo mina ngenye kusukela umPristi Carl-Heinrich Smuzzler (athalalise isipelingi) lapho fastidiously umkhankaso izinhlamvu nge amanani facile “Nix Pix” futhi “Costa Mahhala”. Amahlamvu babe kumnandi ukufunda mayelana sonke isifunda. Ngakho-ke, ngibheke phambili eziningi lezi izinhlobo Amameyili.
Siyabonga isayithi enkulu ukuthi mina manje ukujoyina nge ababhalisile.
Peter yangekhulu Vikholms i Anundgård
Roland Hultman ku 12 Januwari, 2012 ngesikhathi 08:56 wathi:
fun Njalo ukufunda ngalokho kwenzekani endaweni yami ngokushesha njengoba ikhefu nje kokufunda ngalokho okwenzekayo e izingxenye ezimaphakathi aphume umasipala.
Kudos kuwe ophethe lesi kithi abathanda, ithemba uthola usizo ukufeza lokhu.
Holm wesifunda liyindawo engcono kunazo zonke bengilokhu e phakathi kwami ​​ngaphezu kwalokho okwakungenziwa 60 – ukuphila unyaka kuze kube manje futhi ngeke cishe ahlale ngakho….
Niklas ku 30 Novemba, 2011 ngesikhathi 18:41 wathi:
HBU Siyabonga wonke umsebenzi owufaka phansi ngathi lapha emaphandleni! =)
#31 ukuhlola entsha Guestbook feature =)